बिहे आज नन्दा मिडियामा। रमेश र कल्पनाबारे यस्तो भनिन हेर्नुहोस – Sandesh Press
December 7, 2020 135
तस्बिरहरू : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर
तर चार वर्षपछि उनले ‘मिस नेपाल’को ताज पहिरिन पाएकी छिन् । अब उनले ‘मिस वर्ल्ड’मा पनि प्रतिनिधित्व गर्न पाउने छिन् । ‘मिस वर्ल्ड’मा पनि आफ्नो पहिचान तिखार्ने मन छ उनलाई । ‘जसरी नेपालले मिस वर्ल्डको प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो । त्यसरी नै तयारी गर्ने हो । सायद जित्छु पनि,’ शनिबार मिस नेपाल वर्ल्डको ताज जितेपछि उनले भनिन् ।
सन् २०१६ मा मिस नेपालको नजिक पुगेर घर फर्कदाको क्षण कहिल्यै बिर्सदिनन् नम्रता । २ महिना रोएरै बिताइन् । ‘२ महिना सम्म रोएकी थिएँ । ताज पहिरिँदाको दिन त मलाई केही फरक परेको थिएन । तर त्यसको भोलिपल्टबाट लगातार आँसु झर्‍यो । धेरै मन दुखेको थियो,’ उनले पुरानो दिन सम्झिन्
मिस नेपालबारे थाहा पाउने भएपछि नै हो नम्रताले मिस नेपाल हुने सपना देखेको । कक्षा तीनमा पढ्दै गर्दा विज्ञान पढाउने शिक्षकले भविष्यमा के बन्छौ भनेर सोध्दा उनले जुरुक्क उठेर जवाफमा भनेकी थिइन्, मिस नेपाल । सानो बेलादेखि नै मिस नेपालतिर उनको झुकाव बढ्न थाल्यो । कक्षा ८ र ९ देखि यसबारे थप जानकारी बटुल्न थालिन्
कहाँचाहिँ कमी भयो भनेर आफूलाई तयार गर्दै गएँ । चार वर्ष धेरै नै मिहिनेत गर्नुपर्यो । मेरो बोल्ने क्षमता राम्रो थिएन जस्तो लाग्थ्यो । त्यसमा सुधारें,’ २३ वर्षीया नम्रताले सुनाइन् ।
यो पटकको प्रतिस्पर्धा सजिलो भने थिएन । सबै प्रतिस्पर्धी प्रतिभाशाली थिए । प्रतियोगिताकै दौरान एक पटक शीर्ष ६ सम्म पनि पुग्दिन कि भन्ने लागेको थियो । ‘१९ प्रतिस्पर्धी एकदमै राम्रा थिए । नतिजा सोच्न नसकिने थियो । तर म खुशी छु । मेरा प्रतिस्पर्धी साथीहरुबीच मलाई ताज पहिर्याइयो,’ दंग पर्दै सुनाइन्, ‘चार वटा विधामा एउटा उपाधि जित्छु भन्ने आश लिएर आएकी थिएँ । तर अन्तिममा मेरो नाम नै विजेता घोषित भयो
मिस नेपाल हुनेहरु कतिले आफ्नो करियर फिल्मतिर पनि देख्छन् । निकिता चाण्डकले पछिल्लो उदाहरण हुन् । तर, नम्रताले तत्काल जाने सोचेकी छैनन्
जिम्मेवारीका हिसाबले ताज कत्तिको गह्रौं छ ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘ताज गह्रौं नै छ । जिम्मेवारी धेरै छन् । सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने छ ।’
Prev१५ दिनपछि थियो पहिलो वर्षगाँठ, कोरोनाले लियो ज्यान !
Nextमनोज गजुरेलको बिहे हुने भएपछि मिना ढकालले पनि खोजिन् केटा, लेखिन् यस्तो स्टाटस
कक्षा ११ पढ्दा पढ्दै केटासंग भागेपछि सपना यसरी सडकमा पुगेकी थिइन् ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)